Ny iPhone 7 Plus dia hanana RAM 3GB | Vaovao IPhone
Hevitra IPhone 7
Tsy mijanona mihitsy ny tsaho momba ny iPhone. Iray volana latsaka taorian'ny nanombohana ny iPhone 6s, na talohan'izay aza dia efa nisy resaka momba izay hitranga amin'ny iPhone 7, araka ny tsiliantsofina sasany. Ny tsaho izay lazainay aminao anio dia nateraky ny fanambaran'ny mpandalina iray, saingy tsy Ming-Chi Kuo ity indray mitoraka ity, na dia mifanindran-dalana amin'izany aza amin'ny lafiny sasany. ny Avril Wu no antsoina hoe mpandalina, miasa ho an'ny TrendForce ary milaza fa ny iPhone 7 Plus ho tonga miaraka amin'ny fitomboan'ny fahatsiarovany RAM, manomboka amin'ny 2GB amin'ny iPhone 6s mankany amin'ny 3GB an'ny RAM amin'ny maodely 5.5 next manaraka.
Etsy ankilany, mino i Wu fa ny iPhone 7 Plus dia ho tsy tantera-drano, ary ity dia zavatra iray izay nanomboka nahazo tanjaka tamin'ny fanandramana fanoherana ranon-javatra voalohany an'ny iPhone 6s ary, taty aoriana, hatramin'ny fanamarinana ny iFixit momba an'io raharaha io, izay nahita fa nanisy fanovana ny tranga iPhone 6 i Apple ka ny iPhone 6s tsy dia voan'ny firodana na fiparitahan'ny ranonorana aza. Raha ny hevitry ny tena manokana dia tokony hidika izany fa ho avy ny iPhone manaraka miaraka amin'ny fanamarinana IPX7.
Amin'ny zavatra tsy ampifanarahan'i Wu amin'i Ming-Chi Kuo dia izay lazaina isan-taona ary amin'ny farany dia tsy tanteraka. Ny mpandalina dia tsy milaza fa ny iPhone 7 dia havoaka amin'ny volana Jona, raha mbola tsy ao amin'ny tapany faharoa amin'ny 2016 (Jolay farafaharatsiny). Ho fanampin'izay, maminavina fa total Fitaovana 260 miliara hatramin'ny faran'ny taona, izay maneho ny fitomboana 12,5% isan-taona, mahatratra ny anjaran'ny tsena eran'izao tontolo izao 18,5%. Hitako fa be fanantenana i Avril Wu.
Mikasika ilay iPhone 4-inch dia mino ilay mpandalina fa amin'ny taona ho avy dia hisy maodely maotina kokoa, saingy maminavina fa hamely ireo magazay amin'ny telovolana faharoa 2016, izay manome ny fahafaha-aseho miaraka amin'ny iPhone 7, raha amin'ny ny farany dia ny anarana voafidy ho an'ny iPhone vaovao, izay azo inoana indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 7 » Ny iPhone 7 Plus dia hanana RAM 3GB sy tranga tsy misy rano [RUMOR]
Azoko atao ny miloka izay tadiavin'izy ireo fa ny iPhone 7 dia TSY hanana 3Gigas de Ram !!
ny paoma dia tsy mametraka ireo zavatra "fanampiny" ireo amin'ny fitaovana ao aminy.
Na dia kely aza ny ondrilahy noho ny mpifaninana aminy, dia matanjaka kokoa ny iPhone. Ny Samsung S6 dia manana ondrilahy 3gb ary ny iphone misy 1gb dia mandeha tsara kokoa.
Marina izany, ny iOS dia tsy mila Ram firy handrosoana tsara, fa raha ilaina izy ireo rehefa tonga ny fanavaozana ary manomboka mihazakazaka ny iPhone fa tsy mandeha toa ny teo aloha.
Miaraka aminao aho… haharitra 2 GB izany !!!
Louisrengelsantis dia hoy izy:
Ny iPhone 7 dia hantsoina hoe maodely telo izay havoaka amin'ny taona 2016 amin'ny 5,5. 4,7. ary 4,0 misy toetra samy hafa mahatonga ny fahasamihafana ihany koa amin'ny sandany
Valiny tamin'i Luisrengelsantis
miomàna iPhone 7 !! Izay zavatra hafa rehetra hivoahako dia hihaza anao aho